juin 2015 – filazantsaramada
« …Eny, sambatra ny firenena izay manana an’i Jehovah ho Andriamaniny. » (Salamo 144:15b)
Publié parfilazantsaramada juin 25, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Mirary soa ho antsika rehetra amin’izao fetim-pirenena Malagasy izao.
« Aza matahotra izay efa hiaretanao; indro, ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-trano-maizina mba ho voazaha-toetra hianareo, ary hanam-pahoriana hafoloana. Aoka ho mahatoky hatramin’ny fahafatesana hianao, dia homeko anao ny satroboninahitra fiainana. » Apok 2:10 Eo amin’ny fiainana neken-tsika arahina, ho sampana miray amin’Ilay fotoboaloboka dia indraindray misy zava-tsarotra mitranga eo amin’ny fiainantsika, ary […]
Publié parfilazantsaramada juin 25, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FIZAHAN-TOETRA!
Fivoriana savaranonando Mandrakariva dia atomboka amin’ny Fampiofanana antsoina hoe: “Fampitaovana ny olona masina” ny fiaraha-miasan’ny FF amin’ny Fiangonana. Miendrika fiaraha-miombon’antoka moa izany fiaraha-miasa atsangana izany, izay mikendry indrindra ny hampahomby bebe kokoa hatrany ny asa Tafika Masina tanterahin’ny Fiangonana. Ho an’ny taom-piasana 2015/2016 (Jona 2015-May 2016) dia hisy ny Fampiofanana izay iarahana amin’ireo Fitandremana FJKM […]
Publié parfilazantsaramada juin 24, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana / Feon’ny Filazantsara (FF)
NY FANARAHANA NY TOMPO.
« Dia hoy Jesosy tamin’ny mpianany: Raha misy olona ta-hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka Ahy. » Matio 16:24 Ny Tompo miresaka amin’ny mpianatra. Tsy misy elanelana tokoa teo Aminy sy ireo mpianatra. Nisy ny fiantsoan’i Jesosy ny mpianatra tsirairay avy ho eo Aminy. Ny faneken’ireo mpianatra ho eo […]
Publié parfilazantsaramada juin 18, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FANARAHANA NY TOMPO.
Fiaraha-miasa amin’ny Tobim-pifohazana.
« Fa izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena. » (Matio 24:13). Tamin’ny alalan’izany tenin’Andriamanitra izany no nanorenana indray ny Fankalazana ny isan-kerin-taonan’ny Toby Fiadanana Fiaferana, izay zanaky ny Tobilehibe Ankaramalaza ny 11-12-13-14 Jona 2015 lasa teo. Nasain’ny Birao sy ny Komitin’ny Fiangonana handray anjara tamin’ny fitarihana fotoana sy ny vakiteny ary ny toriteny moa ny FF ny […]
Publié parfilazantsaramada juin 18, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-miasa amin’ny Tobim-pifohazana.
TSY AVY TAMIN’NY ASA!
« Dia tsy avy tamin’ny asa amin’ny fahamarinana nataontsika, fa araka ny famindrampo kosa no namonjeny antsika. » Titosy 3:5 Ny olombelona dia mila famonjena satria very: Nisy làlana nosoritan’Andriamanitra harahiny nefa niala tamin’izany izy ka toy ny ondry very, diso làlana. Izany no ambaran’ny Soratra Masina hoe: isika koa dia adala fahiny, tsy nanaiky, voafitaka, dia […]
Publié parfilazantsaramada juin 16, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TSY AVY TAMIN’NY ASA!
Taom-piasana vaovao 2015/2016
Fanadiovana ny Toeram-piasana Tsiahivina hatrany fa ny taom-piasan’ny FF dia manomboka ny volana Jona ka hatramin’ny volana May. Nifanandrify indrindra tamin’izao taom-piasana vaovao izao ny fanadiovana sy fanatsarana ary ny fandokoana ny Foiben-toerana eto am-pandrana. Nandritra izany moa dia niara-nisalahy ireo mpiara-miasa rehetra tamin’ny fanadiovana ny toeram-piasan’ny tsirairay avy. “Fa tsara tokoa ny miasa amin’ny […]
Publié parfilazantsaramada juin 11, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Taom-piasana vaovao 2015/2016
« Ary Izaho hangataka amin’ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny Fanahin’ny fahamarinana, izay tsy azon’izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany fa hianareo no mahafantatra Azy satria mitoetra eo aminareo Izy, ary ho ao anatinareo. » Jaona 14:16-17 Ny iraka nampanaovin’Andriamanitra an’i Jesosy dia ny […]
Publié parfilazantsaramada juin 5, 2015 juin 4, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FANAHIN’NY FAHAMARINANA
« Film » Ifanakalozan-kevitra
Angataho mandrakariva ny Fanahy Masina, Izy no mahay mampahafantatra anao fa Jesosy no zanak’Andriamanitra velona. Maro ireo Fiangonana manao ny ainy tsy ho zavatra eo amin’ny fikolokoloana ireo kristiana ao aminy, indrindra ny lafiny ara-pinoana. Tsapan’ireo raiamandreny am-Panahy fa ilaina araka izany ny manokatra fiaraha-miasa amin’ireo izay afaka manohana azy, mba hiara-misalahy amin’ny fanatanterahana ny […]
Publié parfilazantsaramada juin 3, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur « Film » Ifanakalozan-kevitra